ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ခြေနင်းစက်ခလုတ်ကို ထုတ်လုပ်သော Zhechi Electric
ပတ်လမ်းအတွင်းရှိ Foot Pedal Switch နှင့် ကိုက်ညီသော ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ AC 50 ~ 60Hz၊ အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား 380V AC အထိ အဆင့်သတ်မှတ်သည်၊ 300VA အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူလျှပ်စီးကြောင်း 5A အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။ မကြာခဏ ဆားကစ်ကို ချိုးဖျက်နိုင်သည်။
China Foot Pedal Switch ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများအတွက် ဈေးသက်သာသော ခလုတ်နှိပ်ပါ။
Foot Pedal Switch ကို ပိတ်ထားသော Push Button ၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများ
1. အမြင့်: 2000 မီတာထက်မကျော်;
2. ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- +40ºC ထက်မကျော်လွန်ပါ၊ -5ºC အောက်မဟုတ်ပါ၊ 24 နာရီအတွင်း ပျမ်းမျှအပူချိန် +35ºC မကျော်ပါ။
3. နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ- +40ºC တွင် 50% ထက်မပိုပါ၊ အပူချိန်နိမ့်ပါက ပိုမိုစိုထိုင်းဆကို ခွင့်ပြုပါ။
4. ညစ်ညမ်းမှုအတန်းအစား: 3;
5. Mounting condition- သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုမရှိဘဲ တပ်ဆင်သည့်နေရာ။ ပေါက်ကွဲစေတတ်သောအန္တရာယ်မရှိဘဲ dielectric တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်မပါဘဲ dielectric သည် သတ္တုကိုတိုက်စားနိုင်ပြီး သီးခြားခွဲထားမှုကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ မိုးရွာခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးနှင်းကျူးကျော်ခြင်းမရှိဘဲ တောင်တက်ရာ၊
6. Mounting အမျိုးအစား- III။
Foot Pedal Switch တွင် Push Button အတွက်အင်္ဂါရပ်များ
မြင့်မားသောခွန်အား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ လုံခြုံသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေနင်းခလုတ်၊
သတ္တုစီးရီးခွံ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၊ သံမဏိဘောင်၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းစသည်တို့၊
ပလပ်စတစ်စီးရီးခွံ၊ OEM / ODM လုပ်နိုင်သည်;
စက်မှုအလိုအလျောက်စက်ကိရိယာများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နှိပ်ခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စသည်တို့အတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
Foot Pedal Switch တွင် Push Button အတွက် လက္ခဏာများ
အမျိုးအစားများ မော်ဒယ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အတွင်းပိုင်းခလုတ် ဆက်သွယ်ပါ။ လှုပ်ရှားမှုအင်အား ပစ္စည်း
Standard type Reset type ပါ။ FS-101 10A 250VAC V အမျိုးအစား မိုက်ခရိုခလုတ် 1A1B 1.2 ကီလိုဂရမ် ပလပ်စတစ်
FS-102 15A 250VAC TM-1704 1A1B 1.1 ကီလိုဂရမ်
FS-3 15A 250VAC V အမျိုးအစား မိုက်ခရိုခလုတ် 2A2B 1.2 ကီလိုဂရမ် အလူမီနီယံသွန်း
FS-3S 15A 250VAC TM1704 2A2B 1.1 ကီလိုဂရမ်
Standard အမျိုးအစား Alternate လုပ်ဆောင်ချက် FS-105 6A 250VAC အစားထိုးခလုတ်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ တွန်းဖွင့်ပါ။
တွန်းပါ။2ကီလိုဂရမ် ပလပ်စတစ်
FS-106 6A 250VAC မိုက်ခရိုခလုတ်ကို တင်သွင်းထားသည်။ 1A တွန်းပါ။
1B တွန်းပါ။ 1.5 ကီလိုဂရမ်
ပုံသေအမျိုးအစား FS-201 10A 250VAC V အမျိုးအစား မိုက်ခရိုခလုတ် 1A1B 0.7 ကီလိုဂရမ် ပလပ်စတစ်
FS-01 10A 250VAC 1A1B 0.7 ကီလိုဂရမ်
FS-1 10A 250VAC 1A1B 0.9 ကီလိုဂရမ် သံ
အကာအကွယ်အဖုံးအမျိုးအစား FS-302 15A 250VAC TM1704 1A1B 3.2 ကီလိုဂရမ် အလူမီနီယံသွန်း
FS-305 6A 250VAC အစားထိုးခလုတ်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ တွန်းဖွင့်ပါ။
တွန်းပါ။ 3.1 ကီလိုဂရမ်
FS-306 6A 250VAC မိုက်ခရိုခလုတ်ကို တင်သွင်းထားသည်။ 1A တွန်းပါ။
1B တွန်းပါ။ 3.5 ကီလိုဂရမ်
FS-502 15A 250VAC TM-1704 1A1B 3.2 ကီလိုဂရမ်
FS-602 15A 250VAC စပရိန်ခလုတ် 2*1A1B 2.8 ကီလိုဂရမ်
FS-702 15A 250VAC TM1704 2*1A1B 3.2 ကီလိုဂရမ်
အကြီးအမျိုးအစား FS-402 15A 250VAC TM1704 1A1B 3.2 ကီလိုဂရမ်
FS-802 15A 250VAC TM1704 2*1A1B 3.2 ကီလိုဂရမ်
hot Tags:: Foot Pedal Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာထဲတွင် အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊2နှစ်အာမခံ